Momba Antsika • Body Rub sy NuRu Massage
Manampy amin'ny fikolokoloana ny vatana sy ny mpanotra Nuru hahazoana $.
Mifandray amin'ny faritra samihafa eto amin'izao tontolo izao miaraka amina fientanam-po iray hitondrana ireo mpanome bodyrub sehatra tsara indrindra hanaovana dokambarotra ny tanany manan-talenta. Raha sanatria tsy misy Backpage ianao, ny manampahaizana manokana momba ny fanorana dia manomboka amin'ny olona tia famaohana amin'ny vatana ka hatramin'ny mpankafy fanorana Nuru. Zahao ny mombamomba azy ireo ary mifandraisa amin'izy ireo mivantana. Ankasitrahanay ireo mpampiasa anay amin'ny endriny sy endriny rehetra ary manantena izahay fa hankafizinay ny tranokalanay araka ny itiavanay azy io isan'andro.
Ny ekipanay any Netherlands!
Mitady olona manan-talenta foana izahay
olona noana hanao asa be.